Amiirka Al-Shabaab oo ku baaqay weeraro laga fuliyo Jabuuti, shaaciyeyna sababta - Caasimada Online
Home Warar Amiirka Al-Shabaab oo ku baaqay weeraro laga fuliyo Jabuuti, shaaciyeyna sababta
Amiirka Al-Shabaab oo ku baaqay weeraro laga fuliyo Jabuuti, shaaciyeyna sababta
Djibouti (Caasimada Online) – Hoggaamiyaha ururka Al-Shabaab Axmed Diiriye Abuu Cubeyda ayaa iska soo duubay fariin cod ah oo socaneysa in ka badan 20 daqiiqo, taas oo uu u diray shacabka reer Jabuuti.
Farrintaan oo ay baahisay warbaahinta taageerta kooxda Al-Shabaab ayuu Abuu Cubeyda “ku raddinayaa” dowladda uu hoggaamiyo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ee xukunta dalka Jabuuti.
Waxa uu sheegay in madaxweyne Ismaaciil uu dalka Jabuuti gacanta u geliyey dowladdo aan Islaam aheyn, kuwaas oo uu sheegay inay hantiyeen dalka yar ee Jabuuti, isla markaana ay hadda hunguriyeynayaan dalkan Soomaaliya.
In kastoo sida hadalkiisa laga dheehan karo uu cadaawadda ugu weyn u qabo dowladda Faransiiska, hadana dowladaha kale ee uu soo hadal qaaday waxaa ka mid ah Mareykanka iyo Shiinaha, kuwaas oo iyaguna saldhigyo militeri ku leh dalka Jabuuti.
“Guud ahaan qabaa’ilka muslimka ah ee ku dhaqan Jabuuti waxaan leeyahay, dhulkiina waxa uu hooy u noqday Faransiis iyo Mareykan, ogaada shacabka reer Jabuutiyow, dowladda waqtigeedu sii dhamaanayo ee ina Cumar Geelle waxay ka mid tahay cadawga ugu weyn ee muslimiinta Bariga Afrika, Ismaaciil Cumar Geelle waxuu suurta geliyey in muslimiinta Bariga Afrika looga soo duulo dalkiina Jabuuti, gaar ahaan Soomaaliya,” ayuu yiri Abuu Cubeyda.
Waxa uu sheegay in hurmar la’aan ba’an uu Jabuuti u hor seeday madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle, islamarkaana ay ku jiraan caburin tii ugu darneyd abid, sida uu hadalka u dhigay.
Sidoo kale waxa uu soo hadal qaaday ciidanka ay Jabuuti u soo dirtay Soomaaliya ee qeybta ka ah AMISOM, kuwaas oo shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed ay u yaqaanaan Hiil-walaal, isagoo sheegay in culeys badan ay ku hayaan xasiloonida Soomaaliya, sida uu hadalka u dhigay Abuu Cubeyda.
“Waxaan reer Jabuuti ugu baaqeynaa inay iska dul qaadaan xukunka Ismaaciil Cumar Geelle, waxaa waajib idin ku ah sidii aad dalkiina uga saari laheydeen Faransiiska mar kasta aflagaadeeya Nebigeenna Muxamed NNKH,” ayuu hadkiisa ku sii daray hoggaamiyaha maleeshiyada Al-Shabaab Axmed Diiriye Abuu Cubeyda.